Gbasara Anyị - MIT Automobile Service Company Limited
Nrụgide oru Kọlụm ebuli
Nrụgide oru Platform Lfit
Nchekwa onwe Ndozi Mmezi bench
Electronic Atụ System
Dent Anam Udeme System + ịgbado ọkụ Machine
MAXIMA, onye otu MIT, bụ onye ndu kachasị na ụlọ ọrụ mmezi ụgbọ ala ndị China na otu n'ime ihe nrụpụta akụrụngwa kachasị arụ ọrụ, nke mpaghara ya bụ 15,000㎡ na mmepụta kwa afọ karịrị 3,000. Ya mmepụta akara ekpuchi oké ọrụ kọlụm inwego, oké ọrụ n'elu ikpo okwu inwego, na akpaaka-ahu itinye n'ọnọdụ usoro, n'ihe usoro, ịgbado ọkụ igwe na mmamịrị Anam Udeme usoro.
A na-ejikarị MAXIMA arụ ọrụ dị arọ nke ndị ahịa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala dị iche iche, ụlọ ọrụ mmezi ụgbọ ala na ụlọ ọrụ ọrụ ụgbọ ala pụrụ iche, rere ya USA, Canada, Australia, United Kingdom, France, Netherlands, Spain, Norway, Portugal, Austria, Switzerland, Russia, Brazil, India, Chile wdg Na 2007, MAXIMA oké ọrụ inwego e gbaara site OA. Na 2015, MAXIMA oké ọrụ inwego e gbaara site ALI, na-aghọ ndị mbụ ALI mma arọ ọrụ inwego emeputa ke China. Asambodo ndị ahụ na-akwalite ntụkwasị obi ndị ahịa ma nyere MAXIMA aka ijere ndị ahịa ụlọ na ndị mba ofesi ozi.
Idebe ihe ohuru bu nchụso nke MAXIMA. Na 2020, ebuputara ọrụ dị elu n'elu ikpo okwu ka ọ gbachara mbọ ruo ogologo oge yana nyocha na nyocha ugboro ugboro. Igwe mbuli elu dị n'ime ala enwetawokwa asambodo CE nke ọma. Ọzọkwa, ngalaba R & D anyị kwalitekwara nnukwu kọlụm na-ebuli ọrụ na-arụ ọrụ na-akpaghị aka. Ọ ga-adị mfe karị ịmegharị ogidi ndị na-enweghị obere ike na oge. Ọrụ a ga - abụ nhọrọ na ngwaahịa n'ọdịnihu.
MAXIMA nwere ụlọ ọrụ pụrụ iche nke Automobile Collision Mmezi na Nnwale Ngwá Ọrụ R&D Center nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ R&D nwere ikike na ebe data na-arụ ọrụ mmezi akpaaka. E wezụga nke ahụ, MAXIMA nwekwara ụlọ ọrụ ọzụzụ ọzụzụ na-arụzi ahụ na-arụ ọrụ nke kachasị elu. Onwem na ulo na-eduga mmepụta akara, nnyocha akụrụngwa, ike R & D ikike, elu-ruru eru mkpara na zuru okè usoro, ịchịkwa mmepụta, àgwà, sourcing na ire ọrụ.
Dika onye okacha-amara nke uwa nke ngw’oru idozi ugboala na ihe mgbazighari ugbo ala mbu, MAXIMA ga-enye nchekwa, okacha amara na ngwa oru ya, nyere ndi ahia aka idozi nsogbu, mee ka oru di elu ma belata ike oru.
Ngosiputa Ngwa Ngwa
AD-mbuli elu ọhụrụ
2018 German ngosi
Nrụsi ọrụ n'elu ikpo okwu